I-CNG Jumbo Tube Trailer-Uthutho nokuGcina-eBeijing Sinocleansky Technologies Corp.
I-SinoCleansky CNG jumbo tube trailer iveliswa ngokwe-ISO11120, iDOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela elilingana nelinye ilizwe lesithathu.
Iimveliso eziluncedo kuthutho lwangaphakathi lwe-CNG. Inobungakanani besikhundla esikhulu sokugcina, ukusebenza kakuhle kwezothutho kunye nokuhambisa ngokulula.
I-HP jumbo itreyila yetreyini ikakhulu ibandakanya i-HP jumbo tube skid kunye neChassis. Itreyila yesayizi eyaziwayo yi-40ft kunye ne-chassis, kwaye i-chassis inokuba yi-3 triaxial okanye i-2 triaxial.
Njengeyunithi epheleleyo, ngokuyintloko siyila iindidi ezimbini zekharavani: Inye luhlobo lwesakhelo olubizwa ngokuba yityhubhu enkulu ye-jumbo enokuthi ilayishwe kwaye ithululwe kwisisu semoto. Isatifikethi seContainer siyafumaneka kwisikhongozeli sethu sebhokisi enkulu Enye yeBhandage yohlobo lwe-jumbo tube trailer ethi iskid & chassis zilungelelaniswe kunye.
2. Ezi nkcukacha zingasentla zenzelwe kuphela iintlobo zethu eziqhelekileyo. Iiparameter ezichanekileyo ezichanekileyo kunye nemizobo yobugcisa ziyafumaneka xa ziceliwe.
Itreyila yetyumbo enkulu ifuna ukuthunyelwa njengomthwalo omkhulu.
Izikhongozeli ze-jumbo tube zinokuhanjiswa njenge-ISO tank container.
I-trailer ye-CNG jumbo ityhubhu ihanjiswa nengxelo yovavanyo yomntu wesithathu kunye nengxelo yeefektri eneenkcukacha. Ingxelo yovavanyo lomntu wesithathu ibandakanya uvavanyo kwisilinda nganye, kunye novavanyo lokuqina komoya weskid. Ingxelo yomzi-mveliso iya kubandakanya isiQinisekiso soMgangatho, iNcwadi yokuFundisa, ingxelo yoomatshini kunye neekhemikhali, njl.
Sinoluhlu lwemveliso esele lukhona ukuze ulujonge kwaye ukhethe; Okanye ungasitshela indawo yakho efunekayo yokugcwalisa / uxinzelelo olusebenzayo / umthamo wamanzi, emva koko siya kuncoma imodeli efanelekileyo kuwe; Ngapha koko, iJumbo Tube trailer ungenziwa ngemfuneko, ukuze sikwazi ukuxoxa ukuba kukho naziphi na iimfuno ezizodwa.
Izilinda zethu zejumbo zenziwe ngokwe-ISO11120 / DOT / ASME esemgangathweni, kwaye sinokunika ingxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, i-LRS, i-TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo.Ukongeza, iisilinda zethu zejumbo zinokuqinisekiswa yi-TPED nge uphawu, ezinye zeemodeli zethu zeJumbo Tube Skid ziqinisekisiwe yi-ADR, kwaye ezinye iimodeli zinokuqinisekiswa ngokweemfuno zabathengi.